Sannadka weyn ee Google Chrome - Geofumadas
Sanadka ugu weyn ee Google Chrome
Juunyo, 2012 Internet iyo Blogs
Kiiska Google Chrome waa tusaale layaableh oo ah wixii 4 sano kahor la yidhi: "Browser-ka doonaya inuu noqdo nidaam hawlgal"
Waxaan xusuustaa bisha Sebtembar ee 2008 waxaan qoray oo ku saabsan sida Google ayaa bilaabay shabakad u gaar ah, markii rajada laga qabo in xukunka laga tuuro Internet Explorer ay umuuqato mid waalan sida fikirka hada ah in iOS ay awoodi doonto inay dhaafto Windows sadexda sano ee soo socota. Jaantuska kore wuxuu na tusayaa in IE uu lahaa 71%, Firefox 26% inta kalena waxay ku jireen safka iyaga oo aan dhaafin 2%.
30 bilood ka dib, kaliya hal sano ka hor ayaan dib ugu soo laabtay mawduuca, maqaalkana Google Chrome 30 bilood ka dib, iyadoo la adeegsanayo tirakoobyadayda waxay muujisay sida Chrome ujoogtay ku dhawaad ​​23% halka Firefox uu gaaray 29% Internet Explorer ayaa si deg deg ah ugu dhacay 44%.
Laakiin sanadkii la soo dhaafey wuxuu muujiyey inaan khaldanahay, in kasta oo aan aaminsanahay in biraawsarkani dhaafi doono labadaba, igamana dhicin aniga inuu ku samayn karo wax kayar 12ka bilood ee soo socda. Eeg sida tirakoobka 30-kii maalmood ee la soo dhaafay u dhigay Chrome 39%, Internet Explorer 31% iyo Firefox 23%. Tani waxay muujineysaa in biraawsarku uu ku guuleystay inuu ka saaro labada isticmaale, in kasta oo koritaanka Safari uu sidoo kale soo ifbaxayo, oo ku dhowaad 4% qaadasho xiiso leh oo ku xiran meeleynta taleefannada gacanta.
Dhibaatada ugu wayni ma aha oo kaliya Internet Explorer, laakiin sidoo kale Windows iyo Office sida badan oo ka mid ah kobcitaankaan ma aha oo kaliya sababo la xiriira navigation laakiin isdhexgalka adeegyada la xidhiidha oo hadda laga samayn karo Chrome sida waxyaabaha fudud:
U dhis dukumiinti Ereyga / Excel wada shaqeyn ah. Waxaan ku qaadanay khibrada tan Cartesia iyo GabrielOrtiz qaabeynta qaabka Z! Meelaha iyo waa inaan qirto in aysan waligeed suurtagal ahayn dariiqii hore ee loo adeegsado Microsoft Word.
Toddobaadkan Google waxay soo saartay noocdeeda iPad / iPhone, in kasta oo ay ceyriin tahay, waxaan u isticmaali doonaa in ka badan Safari. Mar dambe karti uma lihi laakiin aqoon ahaan, ogow in cilladaha hadda jira lagu xallin doono laba toddobaad gudahood. Waxaan xasuustaa inay jirtay wax isbuucle ah oo loo yaqaan 'Chromy' kaasoo loo yaqaan 'Chromy', kaas oo ay ahayd inuu gadaal ka badalo magiciisa sababo la xiriira hanjabaad uga timid Google oo ah inay dacweynayaan iyaga -Ma aha in la sameeyo nuqul ama isticmaalaya magaciisa laakiin uu ku xadgudbayo la'aanta hal-abuurka-.
Waxaa laga yaabaa in tusaalaha aan soo xushay ee GoogleDocs uu yahay mid muuqda, laakiin waqti dhow ama goor dambe waxaan ogaan doonaa in waqtiyadu si dhakhso ah isu beddelaan; mar dambe kuma mashquulayno nidaam qalliin inbadan haddii laga sameyn karo daruurta -iyo koorso mobile ah-. Inkasta oo kumbuyuutarrada kumbuyuutarka ee kumbuyuutarrada ah ay sii wadi doonaan in la isticmaalo oo la sii iibiyo, haddana waxaa la saadaalinayaa in sannadka soo socda la iibin doono kiniinno ka badan kuwa kombuyuutarrada. Jaamacaddu waxay ku baaba'aysaa saddex, e-maylka, sketchbook, qaamuuska, muusigga muusiga, liiska dukaamaysiga, kamaradda ...
Inkastoo aan qabo raaxo la'aan Google, ma aha oo kaliya sababtoo ah waxay noqon kartaa Microsoft soo socda laakiin sababta oo ah waxay noqon kartaa mid aad u xun, waa inaan qirto in aan ku qanacsanahay ugu yaraan afar ka mid ah alaabteeda oo aan ku guuleystay wax soo saarka:
Google Earth / Khariidadaha, kaas oo uu naga dhigay inaan ka fekerno barta sawirada maalin kasta
AdSense, oo ay ku jirto xayeeysiin internet ah oo sahlan
Google Docs, oo si sahlan loo heli karo dukumintiyada caadiga ah ee la isticmaalo
Dabcan, kumbuyuutar, tusaale ahaan badeecad oo ku guuleysan karta dagaalka in ka yar sanado 4.
Post Previous" Hore Qiimaha istiraatiijiyadeed ee macluumaadka dhuleed
Post Next Muuqaalka sawirka iyo qaybta la jaray AutoCAD 2013Next »
2 Jawaabo "Sannadka weyn ee Google Chrome"
July, 2012 at
Aan aragno sida Google uu ula shaqeynayo Plus, weligii kuma guuleysan mawduuca shabakadaha bulshada.
ALXRAGNVALD isagu wuxuu leeyahay:
Juun, 2012 at
Iyada oo Google Plus ay horey u socotay eegitaanka facebook! sidaa daraadeed
Soo degso Buugga QGIS 3.16 PDF ee Isbaanishka
Waa maxay aqrinta khariidadu?
Maxay yihiin laamaha juquraafiga?
Khariidado muujinaya sida loogu qaybiyo tallaallada COVID adduunka oo dhan
Sidee GIS u Caawinkartaa Degdeg iyo Sinnaan Talaal Qaybinta